Mgbe ị na-eri nri abalị ma na-ekiri TV, Anyị na-ewu ụlọ ọrụ azụmahịa | Martech Zone
Mgbe ị na-eri nri abalị ma na-ekiri TV, Anyị na-ewulite azụmaahịa
Satọdee, Nọvemba 13, 2010 Saturday, October 18, 2014 Bọọlụ Lorraine
Izu ụka a, ndị ọchụnta ego 57 nọ na-arụ ọrụ na ịmalite azụmaahịa ọhụrụ asaa. Site na ngwanrọ ngwanrọ na mgbasa ozi ọha na eze na desktọọpụ laptọọpụ a na-ebugharị, echiche ndị ahụ amalitela ịbịakọta ọnụ.
Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe niile a ga-esi pụta, na ihe ndị ikpe (gụnyere Douglas Karr) Chee echiche banyere echiche azụmaahịa, sonyere anyị maka ịkparịta ụka n'andntanet na okwu ngosi ikpeazụ n'abalị Sọnde: http://www.eventbrite.com/event/851407583
Tags: Indiaigba egbe azụmahịamalitembido izu ụka
Nov 13, 2010 na 1:21 PM
Otu n'ime ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ ka akpọrọ eatdrinkit. Anyị ga-anọ na eatdrink.it ma ị nwere ike iso anyị @eatdrinkit. Nọgide na-ele anya, anyị ga-ekpughere ozi ndị ọzọ ka anyị na-abịaru nso pitch na Sunday. Ọ ga-amasị anyị ịhụ gị ebe ahụ na pitch ka ị nwee ike ịme ntuli maka iji ya. Echere m na ị ga-enwe mmasị n'ihe anyị na-eme!